शेर्पा भाषाको चलचित्र ‘टिन्छेन फामा’सँगै दुई एल्बम ल्याउँदै कुङ्गा – Everest Times News
शेर्पा भाषाको चलचित्र ‘टिन्छेन फामा’सँगै दुई एल्बम ल्याउँदै कुङ्गा
२०७४ जेष्ठ ४, बिहीबार २०:४९
‘हम्मैलिला खैलला हम्मैलिला…’ बोलको गीतबाट चर्चामा आएकी कुङ्गा ङिमा शेर्पा यतिबेला शेर्पा भाषाको चलचित्र ‘टिन्छेन फामा’ निर्माणमा व्यस्त छिन् । सोलुखुम्बुको गुदेलमा जन्मिएकी कुङ्गा नेपाली गीत, गजल र मुक्तक लेखनमा परिचित नाम नै हो । विभिन्न पत्रपत्रिकामा उनको सिर्जना प्रकाशन भइरहेका छन् ।
चलचित्र निर्देशन गर्दै गर्दा बचेको समय उनी आफुले लेखेका गीत, गजलहरुलाई साँगलो सार्वजनिक गर्न पनि उत्तिकै व्यस्त छिन् । एकैपटक दुईवटा एल्बम विमोचनको तयारीमा जोडतोडकासाथ लागेकी छिन् उनी । सगुन र सिक्स ब्रदर एल्बममा गजल, नेपाली लोकपप, सेलो गीत, शेर्पा गीतहरु रहने उनले जानकारी दिइन् । यिनै तीनवटा प्रोजेक्टमा व्यस्त रहेकी निर्देशक÷गायिका कुङ्गा ङिमा शेर्पासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि गरेको कुराकानीः
तपाईको निर्देशनमा बन्दै गरेको चलचित्र कस्तो हुनेछ ? बताइदिनुहोस न ।
‘टिन्छेन फामा’ शेर्पा भाषाको चलचित्र हो । यसको नेपाली अर्थ अभिभावक हो । पछिल्लोपटक शेर्पा संस्कृतिमा भएका आरोहअवरोह र हिमालका घटनाहरु कथामा समावेश छ । चलचित्रको कथा, संवाद मैले नै गरेकी छु । निर्देशनको जिम्मेवारी पनि मैले नै सम्हालेकी छु । निर्माणमा मलाई आङ्कुङ्गा शेर्पा, तेन्जी शेर्पाले सहयोग गर्नुभएको छ ।
नेपाली लेखनमा रमाइरहदाँ शेर्पा भाषाको चलचित्र निर्देशन गर्ने रहर कसरी पलायो ?
नेपाली गजल, गीतसँगै शेर्पा भाषाका गीतहरु पनि लेख्दै आएकी थिएँ । शेर्पा भाषाका चलचित्रहरु एकदमै कम छन् । शेर्पाका कथाहरु समेटिएका साहित्य एकदमै कम भएकोले पनि मलाई यस क्षेत्रमा काम गर्ने रहर पलायो । मैले यसअघि दुईवटा म्युजिक भिडियो पनि निर्देशन गरिसकेकी छु । अहिले चलचित्र बनाउने आँट आयो । आफ्नो समुदायको कथामा आफैले किन निर्देशन नगर्ने ? अरुलाई दिए शेर्पाको स्वाद आउँदैन भन्ने लाग्यो । त्यसैले मैले निर्देशनमा हात हाल्ने आँट गरेकी हुँ । अर्को कुरा शेर्पाले निर्देशन गरेको पहिलो शेर्पा चलचित्र यही हुनेछ ।
कतिको मुश्किल हुने रहेछ यो काम ?
चलचित्र बनाउनु आफैंमा मुश्किल काम रहेछ । यो सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा सुटिङ भएको छ । शेर्पा समुदायको बस्ती हिमालमा भएकोले र यसका कथाहरु हिमालमै पनि सुटिङ भएका छन् । कलाकार, क्यामेरामेनलाई हिउँमा लगेर, हिमालमा लगेर अभिनय गर्नुगराउनु नै जोखिमपूर्ण काम रहेछ । जोखिमै मोलेर क्यामेरामेनलाई, कलाकारलाई हिमालमा लगेर फिल्म खिच्न लगाएँ, अभिनय गर्न लगाएँ ।
तपाईं गीत, गजल र मुक्तकमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ, चलचित्रमा लागेपछि यो यात्रा के हुन्छ ?
लेखन त मेरो पहिलो देखिकै रुचि हो । यसलाई छाड्नै कुरै भएन । अहिलेसम्म गीत, गजल, मुक्तक गरी दुइहजार लेखिसकें । गजलको एल्बमको तयारी भइरहेको छ । एल्बमको नाम ‘सगुन’ राखें । सगुनमा पाँचवटा गजल हुनेछन् । यस एल्बममा रामकृष्ण ढकाल, शिव परियार, मेलिना राई, मिङ्मा शेर्पा र सोनाम शेर्पाको स्वर रहेनछन् । दोस्रो एल्बम पनि तयारी हुदैछ, यसको नाम सिक्स ब्रदर राखिने योजना बनाएकी छु । यो मेरो सोलो एल्बम हुनेछ । शेर्पा भाषाको गीत, लोकपप नेपाली गीत र सेलो गीत यसमा रहनेछन् । मेरो दाजुहरु ६ जना हुनुहुन्छ । म कान्छी हुँ । दाइहरुमै समर्मित भएर यो एल्बम आउनेछ ।
गायनमा पनि उत्तिकै लाग्नुभएकै छ, गायनतिरको हालखबर पनि सुनाइदिनुस न ।
प्रेम लोप्चनसँग ‘हम्मैलिला खैलाला…’ गीत गाएपछि धेरैले मनपराइदिनुभयो । त्यसपछि गायनमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो । शेर्पा र नेपाली गरी ३० वटा जति त गीत गाइसकें । अहिले आउने एल्बममा ६ वटा गीत पनि आफ्नै स्वरमा आउँदैछ ।
यति धेरै काम एकैपटक किन गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले छुट्टीमा छु । रसियाबाट नेपालमा ६ महिनाका लागि आएकी छु, यही कामको लागि भनेर । त्यसैले मैले यो अवधिमा तीनैवटा काम सकाउनु छ । असारसम्ममा चलचित्र पनि फाइनल हुन्छ । एल्बम पनि सार्वजनिक भइसक्नेछ ।
कतिपय भाषामा चलचित्र निर्माताहरु, गायकहरु एकदुई वटा चलचित्रमा काम गर्छन् र हराउँछन्, तपाईको आफ्नो योजना के छ ?
मलाई सानैदेखि यो क्षेत्रमा रुचि थियो । तर, अवसर पाएन, परिवारको सपोर्ट भएन । सानैबाट यही लाइनमा आउन पाएको भए यति धेरै अलमलमा पर्ने थिएन । संगीतप्रति परिवारको सहयोग नभए पनि म यहाँसम्म आएकी छु । यो सबै शेर्पा समाजको सहयोगले भएको हो । सम्पूर्ण श्रोता, दर्शकको माया पाएकीले म गीतसंगीत र चलचित्रमै निरन्तरता दिन्छु ।